Maitiro ekudzima ako ese maemail account | Gadget nhau
Pasina nguva refu ndakanga ndine account ye email yaichengeterwa vashoma vane rukudzo vaikwanisa kuwana Internet. Mazuva ano zvinhu zvachinja zvakanyanya, uye vazhinji vedu tatova nekwaniso yekunetwork yemasaiti, kwete chete kubva kuzvinhu zvedu, asi kubva chero kupi nekutenda kune edu nhare mbozha. Zvakare, nekuchengetedzeka kuzere, dai taizoitsvaga, zvaizotiomera kuti tiwane munhu asina email kero.
Nekudaro, dambudziko iro rave kuonekwa pachiitiko rine huwandu hukuru hwemaakaundi maemail, ayo dzimwe nguva atisingashandise uye kuti kazhinji kazhinji tinofanirwa kukanzura. Kune izvi zvese, nhasi ticha tsanangura nenzira yakapusa maitiro ekudzima ako ese maemail account, zvisinei nekuti anobva kuGmail, Yahoo kana Hotmail uye nenzira inokurumidza.
1 Maitiro ekudzima iyo email email account
2 Maitiro ekudzima Hotmail email account
3 Maitiro ekudzima Yahoo mail account
4 Maitiro ekudzima iyo AOL email account
Maitiro ekudzima iyo email email account
Nhasi Gmail ndiyo inonyanya kushandiswa sevhisi pasi rose uye kwaunogona kunyange kanopfuura email imwechete kero. Google, muridzi webasa, zvinoita kuti zvive nyore kwazvo kuti tidzime account, sezvazvinenge mune zvese zviitiko, zvaunofanira kutevedzera anotevera matanho atinokuratidza pazasi;
Pinda kune iyo peji Zvinodiwa neakaundi
Zvino tinya pane sarudzo Bvisa Zvigadzirwa. Muzviitiko zvakawanda iwe uchafanirwa kudzoka zvakare muaccount yako seyero yekuchengetedza
Pedyo neGmail, unofanirwa kudzvanya Delete sarudzo
Iye zvino unofanirwa kuteedzera rairo dzinoratidzwa pachiratidziro kubvisa zvachose yako email account kubva kuGoogle sevhisi
Maitiro ekudzima Hotmail email account
Paive nenguva apo Hotmail maemail ndiwo ainyanya kushandiswa, kunyanya nekuti ivo vakapa mukana kune iyo Messenger application, yaive yekutanga WhatsApp. Nekudaro, parizvino mashandisiro ayo anodarika zvishoma uye Microsoft inotipa mukana wekubvisa maAptlook.com email maakaundi (aimbove Hotmail).
Paive nenguva apo Hotmail maemail ndiwo ainyanyo shandiswa, kunyanya nekuti ivo vakapa mukana kune iyo Messenger application, yaive WhatsApp yekutanga. Nekudaro, parizvino mashandisiro ayo anodarika zvishoma uye Microsoft inotipa mukana wekubvisa maAptlook.com email maakaundi (aimbove Hotmail).
Kuti ubvise zvachose yako Hotmail email account, iwe unofanirwa kutevedzera anotevera matanho, ayo zvakare, uye kusiyana nezvatinogona isu tese kufunga, ndiwo akapusa;
Tsvaga iyo Microsoft account sevhisi (yaimbozivikanwa seMicrosoft Passport Network) uye pinda muakaunti yaunoda kudzima
Iye zvino iwe unofanirwa kuteedzera iyo mirairo inoratidzwa pachiratidziri uye kuti iwe unogona kuona mumufananidzo uri pamusoro. Izvo zvakakosha kuti iwe uverenge zvakanyatsonaka nekuti zvikasadaro unogona kukanganisa zvisizvo kwete yako email account uye maemail, asi zvakare, semuenzaniso, mafaera akachengetwa muDhiraivha.
Kana tangosvika kumagumo Microsoft inomirira mazuva makumi matanhatu kuti ibvise zvachose account yako. Kana iwe ukachinja pfungwa dzako, iwe uchafanirwa chete kupinda zvakare munguva iyoyo yenguva uye kuvharwa kweakaundi kuchamiswa. Ukasa pinda zvakare mukati memazuva makumi matanhatu, Redmond ichabvisa zvachose account yako.
Maitiro ekudzima Yahoo mail account
Kwete kare kare Yahoo! Yaive imwe yemasevhisi anotungamira eemail pamusika, uye nhamba hombe yevashandisi yaive neakaundi email ne @ yahoo.es kana @ yahoo.com. Parizvino hofori yekuAmerica haisi kupfuura panguva yayo yakanaka uye vakawanda uye vashandisi vazhinji vari kutizira kune mamwe mapuratifomu. Chimwe chezvikonzero zvakawanda zvekufora uku kushomeka kwekuchengeteka, senge uya aigara muna 2014 na uye kuti zvakadaro hazvina kureururwa kune vashandisi kusvika muna2016.
Kuti uvhare yako Yahoo email account, unofanirwa kutevedzera anotevera matanho;
Tsvaga iyo chaiyo yekuvhara peji reiyo Yahoo account kana yakasarudzika account account yekuvhara mune iyo chiitiko iyo yako login mode iri nhare mbozha.
Zvino pinda password uye tinya pa Vhara account. Iwe unofanirwa kupedzisa captcha uye wosimbisa kubviswa sedanho rekupedzisira
Maitiro ekudzima iyo AOL email account
AOL Iyo ndeimwe yeanonyanya kufarirwa maemail masevhisi, asi nekufamba kwenguva yarasikirwa nechikamu chikuru cheyakakurumbira. Uye zvakare, zvakare inosanganisira kutipa isu mukana wekutarisira kunyoreswa kune maAOL services. Nekubvisa account yedu, tinorasikirwa nesarudzo yekugadzirisa email yedu, asiwo mukana wekutarisira kunyoreswa.
Kudzima account yeAOL unofanirwa kutevedzera anotevera matanho izvo tinokuratidza pazasi;
Famba webhusaiti yeAOL uyezve account yako nekupa iro zita rekushandisa nephasiwedi yaunoshandisa kazhinji
Iye zvino unofanirwa kuisa mhinduro kumubvunzo wekuchengetedza wavanotibvunza uye tinya bhatani re "Enderera".
Sarudza sarudzo "Manage my AOL gutter" mune "Service Sarudzo" chikamu
Zvino tinya pane bhatani re "Kanzura", iro rinouya nemenyu inodonhedza matinofanira kusarudza chikonzero chekudzima account yedu.
Chekupedzisira, tinya bhatani "Cancel AOL" uye neizvi maitiro acho anenge apedza uye account yako inenge yatodzimwa
Nguva dzese dzatinadzo nekutarisira kuwanda kwemaakaundi maemail, asi pamwe unofanirwa kumira kuti ufunge kuti mangani aunonyatsoda uye uchifunga kudzima dzese dzausingachashandise. Muchikamu chino takakupa makiyi ekubvisa maakaundi eemail anozivikanwa, saka buruka ushande uye udzikise nhamba yako yeemail account.
Wakakwanisa here kudzima maemail account ako nekutevera nhanho dzataratidza?. Tiudze munzvimbo yakachengeterwa makomendi pane ino positi kana kuburikidza nechero yemasocial network matiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Tutorials » Maitiro ekudzima ako ese maemail account
Maria Olmo akadaro
Ndakawana chinyorwa chako chakanaka kwazvo uye chinobatsira kwazvo, ndakatora mukana kudzima account yandaisaziva maitiro. Ndatenda.
Ini ndawanawo, ndichitsvaga maitiro ekudzima account, iyi imwe saiti iyo yandakawana inonakidza, kuitira kuti inogona kubatsira mumwe munhu http://www.eliminartucuenta.com
Pindura María Olmo
Mhoroi, ini handisi kuwana nzira yekudzima account yangu yeaol.
Ini ndinopinda nesername uye password, haina kundibvunza
inoenderana mubvunzo wekuchengetedza.
Ini ndinoenda kuzasi kuruboshwe kwepeji ku: Akaundi yangu, tinya uye
Ini ndinoenda kune zvemunhu ruzivo, hapana imwe sarudzo.
Seedi, yemasanganiswa koni inobvumira kutamba mitambo paCD